Ihe nzuzo abụọ nke ezinụlọ na -erughị, Sandrine Destombes
Ihe nzuzo abụọ nke ezinụlọ na -adịchaghị, nke Sandrine Destombes dere
Dị ebe a
Maka plethora nke nnukwu ndị na -akọ akụkọ French nke ụdị noir (jikọtara ya na enyo), nke onye ndu ya na -edu Obere o thilliez, na -esonye ugbu a, site n'ịhụnanya a ma ama nke ukwuu, Sandrine Ebibi. Onye ode akwụkwọ ọhụrụ ga -eburu n'uche na oke iwe nke Gallic noir.
Na igosi bọtịnụ a. Akwụkwọ akụkọ banyere ihe nzuzo nke ezinụlọ pere mpe (dabere na mmụba dị na ndò ụlọ nke na -akwado onye ọ bụla n'ụzọ nke ha Joel dike o Shari lapena) na -ewebata anyị na ọnọdụ ahụ emechiri emechi ugboro abụọ na onye maara nke ọma na gburugburu ebe dị jụụ na nke na -enye nsogbu. Ọdịiche a na -ahụkarị n'etiti obodo dị ka ebe udo na ikike ya nwere inwe ndò kacha jọgburu onwe ya na -eduzi anyị na akụkọ a ruo oke ọhụrụ a na -atụghị anya ya.
Ugboro abụọ iji chọta enyo ahụ na -agbagọ nke eziokwu na -agbagọ na akọ na uche dị oke egwu banyere ihe gaara eme. Mgbe emeghị ihe ọjọọ n'oge ya, mgbe a na -atụ anya na ihe arụ ga -apụ n'anya, n'ikpeazụ ihe na -emekarị na -eme. Na ihe ọjọọ nwere ogologo ntachi obi ...
N'otu akụkụ enyo anyị na -eme njem ihe karịrị afọ iri abụọ gara aga. Piolenc na -eche nchegbu nke mfu nke ụmụnne abụọ, Soléne na Raphaël. Naanị Soléne ka enwere ike ịhụ, ebe e gosipụtara ozu ya ihe nkiri macabre nke nnukwu anụ ọjọọ. Nwatakịrị nwanyị ahụ yi uwe ọcha, na -arụtụ aka n'ịdị ọcha na enweghị ntụpọ nke onye omekome ahụ n'onwe ya matara, na -enwekwu ọ delightụ n'ọrụ nlelị ya.
Ma eleghị anya, ọ bụ otu ihe ahụ. Ma ọ bụ ikekwe ọ bụ n'ihu nke ihe nketa ya. Isi okwu a bụ na n'oge ọkọchị udo nke 2018, na -enwe oke ikuku n'oge gara aga na onweghị onye chọrọ ịkpọte, ụfọdụ ụmụaka na -amalite ịla ọzọ. A na -eme nyocha ahụ n'etiti ndị nyocha abụọ nke onye ode akwụkwọ jiri amamihe webata ya, onye uwe ojii na -amaghị ikpe gara aga yana onye ọzọ nwere ike iduga ya n'okporo ụzọ ndị a gbahapụrụ agbahapụ. Ihe niile ga -agba mbọ ịchọta njikọ ahụ nke nwere ike iwepu ohere wee chọpụta ihe na -ejikọ oge gara aga na nke ugbu a.
Ka ọ dị ugbu a, Piolenc na -eleba anya n'ime abis nke ịbụ ebe a bụrụ ọnụ. Ikekwe ekwensu n'onwe ya họọrọ ma ọ bụ naanị kụọ ya n'etiti ubi ya, site na mkpụrụ nke ihe ọjọọ.
Oge a ọ nweghị ihe a ga -ahapụ ka emeghe. Ndụ nke ụmụaka ọhụrụ na -eti mkpu n'etiti ịgbachi nkịtị nke obodo juru anya mgbe ụda nke oge gara aga na -ada n'ime ọgba aghara dị egwu.
Oke esemokwu gburugburu ụmụaka ndị ahụ ezuru na ndụ, mmetụta kacha njọ maka ebe nwere mkpa ịgha mkpụrụ olileanya n'etiti ebe nchekwa gbara ọchịchịrị. Naanị, onye ọ bụla nwere njikọ n'etiti ihe mere n'otu akụkụ nke enyo na nke ọzọ, nwere ike bụrụ onye kacha chọọ na enweghị ihe ọ bụla mara.
Ugbu a ị nwere ike zụta akwụkwọ akụkọ Ihe nzuzo abụọ nke ezinụlọ pere mpe, akwụkwọ nke Sandrine Destombes dere, ebe a:
Tags Novelties na akwụkwọ akụkọ, Akwụkwọ akụkọ thriller, Sandrine Ebibi